Buugga Websaydhka, Buugga Ganacsiga, Liiska Diiwaanka Websaydhka Bilaashka ah
Kani waa liistada liiska ganacsiga, halkaas oo aad ku soo gudbin karto websaydhkaaga si aad ugu liis garato qayb ama qayb hoosaad. Tani waa buugga a Free Website Liiska kuu ogolaanaya in aad u gudbisaa website la Images, Logo, Information, Kharashka RSS, iwm
The Liiska waxaa ka mid ah nooc kasta oo ganacsi oo laga yaabo in dadka la raadinaya iyo mid ka mid ah ugu sahlan oo wax ku ool ah sidii aad u heli iman kara macaamiisha ganacsigaaga.
Qeybaha & Qeybaha
Aniga J K
TV - Raadiye
Fashion - Hadiyado
Midna - Faa'iido
Diiwaanka Websaydhada Ganacsi wuxuu si toos ah u tilmaamayaa ganacsiga la xiriira bixinta adeegyada iyo iibinta wax soo saarka. Tani waxaa ka mid ah adeegyada dayactirka kombiyuutarka, adeegyada website naqshadaynta, adeegyada SEO, adeegyada baabuurta, xirfadaha luqadda sireed, bixiyeyaasha adeegga SEM, iwm
Liiska waxaa ka mid ah ganacsatada ugu caansan in aad ka raadin kartaa by iyaga sooca ku salaysan gobolkaaga si aad u hesho xirfad saxda ah .
Tani waa qayb muhiim ah oo ka mid ah xayeysiinta iyo kor u qaadista boggaaga. Ahaanshaha mid ka mid ah makiinadaha waaweyn ee raadinta, Google waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay mashiinka raadinta ugu fiican ee bixiya natiijooyinka raadinta ugu habboon ee booqdayaasha. Marka laga reebo raacitaanka algorithm aad u adag si loo go'aamiyo darajada degel, Google sidoo kale waxay siisaa milkiilayaasha bogagga inay ku qabtaan ololeyaasha xayeysiiska Google. Tani waa hab loogu talagalay xayeysiinta khadka tooska ah waxaana loo yaqaan xayeysiinta lacag bixinta.
Liistadayada ganacsi, waxaad awood u leedahay inaad hesho lataliyeyaal kaa caawin kara ololeyaasha xayeysiinta Google, soo qaadashada ereyada saxda ah ee saxda ah iyo inaad kobciso websaydhkaaga habka ugu hufan.
BING waa mid ka mid ah matoorada waaweyn ee wax lagu raadiyo, oo ay ku shaqeyso shirkadda Microsoft. Waa mid ka mid ah makiinadaha ugu caansan ee raadinta iyo degellada websaydhadu si joogto ah ayey isugu dayaan inay ku kala sarreeyaan mashiinkan raadinta sidoo kale
Hadda, sida aan ognahay mashiin kasta oo raadin ah wuxuu raacaa nidaam gaar ah oo siyaasado ama algorithm ah si loogu meeleeyo meelaynta degel kasta, waxaa muhiim ah in boggaaga uu buuxiyo dhammaantood. Waxaan leenahay xirfadlayaal ama ganacsiyo ku taxan diiwaankayaga kuwaas oo kaa caawin kara inaad hagaajiso boggaaga oo aad ka dhigto mid ku habboon mashiinnada raadinta iyo inaad ka sareysid darajadaada.
Wikipedia waa encyclopaedia bilaash ah oo bilaash ah oo ku siinaya adiga macluumaad ku saabsan wax walba. Wikipedia wuxuu u sameeyaa bog u gaar ah wax kasta oo aad raadsan karto. Macluumaadka ku jira bogagga Wikipedia waxaa sameeyay ama tifaftiray mutadawiciinta adduunka oo idil.
Liiska liistadaani maahan mid dhexdhexaad ah oo kaliya oo lagu soo gudbinayo websaydhkaaga qaybo iyo qaybo hoosaadyo si aad uga heli karto macaamiil macquul ah meheraddaada, laakiin sidoo kale waxaad ka heli kartaa liiska ganacsiyada iyo xirfadlayaal kaa caawin kara inaad sidoo kale guuleysato.
U Gudbi Liistada Websaydhka Diiwaanka
Soo gudbi liistada websaydhka ee qaybta la doonayo iyo qayb hoosaadyada leh sawirro, macluumaad ...